मनोज–मीना ट्रयाजेडी डिभोर्स | Everest Online News
Reporter: Everest Online News Manoj Gajulrel, Mina Dakal
गत चैतमा भक्तपुरको बालकोटमा रहेको घरको कथा सुनाउँदै हास्य अभिनेता मनोज गजुरेलले भनेका थिए, ‘मेरी मैनाको दुःख मिसिएको हुनाले यो घर मलाई प्यारो लाग्छ ।’ उनले यसो भन्दा उनकी मैना अर्थात् मीना उनीसँगै थिइन् । मनोज अहिले त्यो घरमा एक्लै छन् । उनकी मैना बानेश्वरमा । यी दुवै जोडी तनले मात्रै हैन, मनले समेत छुट्टिइसकेका छन् । काठमाडौं जिल्ला अदालतले यी दुवैको मन विभाजित हुने सरकारी कागजातमा ल्याप्चे लगाइदिइसक्यो । यी दुवैको २२ वर्ष लामो वैवाहिक जीवनमा पूर्णविराम लाग्यो ।
प्रेम र विवाह मान्छेका नितान्त व्यक्तिगत मामिला भए पनि मनोज–मीनाको ‘ट्रयाजेडी’ बहसको विषय बनिरहेको छ । चिया पसलदेखि रक्सी भट्टीसम्म यी दुवैको दुखद् कहानीको खासखुस सुनिन्छ ।डिभोर्सको कारक र कारणबारे मीना आक्रामक रुपमा मिडियासँग खुलेकी छन् भने मनोज मौन नबसे पनि डिफेन्सिभ देखिन्छन् ।
२२ वर्षअघि काठमाडौं, पुतलीसडकमा वारिपट्टि मनोजको स्टेसनरी पसल थियो, पारिपट्टि मीनाको अफिस । मनोजले मीनालाई देखे, मनपराए । साथीमार्फत् मीनाको अफिसको नम्बर लिए । त्यसपछि सुरु भयो ब्लफ कल । दुई महिनासम्म ब्लफ कल गरेपछि बल्लतल्ल विराटनगरमा जन्मिएकी मीना ताप्लेजुङका मनोजसँग भेट्न राजी भइन् । त्यतिबेला मीनालाई फकाउन मनोजले गर्ने ‘ब्लफ कल’लाई एक टिभी कार्यक्रम ‘लभ एन्ड लाइफ’मा ‘लभ कल’को संज्ञा दिएका थिए ।
२२ वर्ष दुवैले एकै छतमुनि बिताए । कहिले आक्रोश, कहिले प्रेमपूर्ण सम्बन्ध रह्यो । उमेरसँगै व्यक्तिमा परिपक्वताको गणना हुन्छ तर सम्बन्धमा वर्ष महत्वहीन हुने रहेछ । यही पुष्टि ग¥यो मनोज–मीनाको टुटेको यात्राले । मनोजले सोमबार शुक्रबारसँगको कुराकानीमा भने, ‘हामीबीच पहिलेदेखि नै सामान्य ठाकठुक परिरहन्थ्यो । माइती, घरपरिवार र समाज हेरेर २२ वर्षसम्म यो सम्बन्धलाई जसोतसो टिकाइराख्यौँ तर अब त बच्चाबच्ची हुर्किसके । उनले पनि म अब ‘सेल्फ डिपेन्डेन्ट’ हुन्छु भनिन् । असन्तुष्टि बोकीबोकी बस्नुभन्दा डिभोर्स गर्नु नै ठीक भनेर सहमत भएँ ।’ मनोज यो ‘ट्रयाजिडी’लाई ‘डिभोर्स’ भन्न रुचाउँदैनन् । उनको परिभाषामा यो ‘ह्याप्पी इन्डिङ’ हो ।
मीनाले पनि मनोजसँगको सम्बन्धको अन्त्य आफ्नो जीवनको नयाँ यात्राको प्रारम्भको रुपमा लिएकी छन् । फेसन डिजाइनर मीनाले आफ्नो रुचिमा मनोज सधैँ बाधक रहेको गुनासो गर्दै भनिन्, ‘उहाँको सफलतामा मेरो ठूलो भूमिका छ, मैले उहाँका लागि धेरै गरेकी छु तर मैले भने उहाँको कहिल्यै साथ पाइनँ ।’ उनले भनिन्, ‘मलाई सधैँ उहाँले घरमै थन्किएर बसेको देख्न चाहनुभयो । एकपल्ट ब्युटीपार्लर र दुईपल्ट बुटिक खोलेँ तर असहयोगले चलाउन सकिनँ ।’
मनोजप्रति गुनासो गरिरहँदा पनि उनी यतिलाई नै डिभोर्सको खास कारण भएको बताउँदिनन् । आफूलाई झुक्याएर लामो समयसम्म मानसिक रोगको औषधि खुवाएर कमजोर बनाई बेडबाट उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पु¥याएको उनको आरोप छ । ‘साथी डाक्टरकहाँ लगेर गलत औषधि खुवाएर मलाई कमजोर बनाएको पछि थाहा भयो,’ उनले स्पष्टीकरणको भाषामा भनिन्, ‘यत्रो वर्ष अन्यायमा परेको त थिएँ, तर नियोजितरुपमा औषधि खुवाएर जीवनमाथि खेलवाड गरिएको रहेछ भन्ने खुलेपछि सँगै बस्ने आँट गर्न सकिनँ ।’
कहिले प्रचण्ड, कहिले केपी ओलीको अवतार । कहिले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प त कहिले लालबाबु पण्डित । दर्शक र स्रोतालाई हँसाउन दिनरात लागिरहे गजुरेल । मीना भने उनले दुनियालाई त हँसाए तर आफ्नै जीवनसंगीलाई हँसाउन नसकेको बताउँछिन् । उनले आइतबार यस सम्वाददातासँग भनिन्, ‘मनोजले दुनियाँलाई हँसाए तर आफ्नै श्रीमतीलाई हँसाउन सकेनन् ।’ ‘मिनाजीलाई सायद त्यस्तो लाग्यो होला,’ स्पष्टीकरणसँगै भावुक हुँदै मनोज भन्छन्, ‘तर मैले क्षमता, योग्यता, बुद्धि र विवेकले भ्याएसम्म हँसाउनका लागि जोक नभने पनि परिवारमा चाहिने आधारभूत आवश्यकता र प्रेम सेयर गरेको थिएँ जस्तो लाग्छ ।’
शुक्रबारसँगको कुराकानीमा मनोज र मीना दुवैले २२ वर्षदेखि नै आफूहरुको सम्बन्धमा खटपट रहेको स्वीकारे । यत्रो वर्ष खटपटमै बसेको जोडी एक्कासि कसरी डिभोर्सको सहमतिमा पुग्यो? ‘खटपट त २२ वर्षदेखि नै थियो,’ मीनाले भनिन्, ‘झगडा हुन्थ्यो । २–४ वर्ष यता मैले फिजिकल टर्चर नपाए पनि मेन्टल टर्चर धेरै पाएँ ।’ मीना अलि आक्रामक देखिए पनि मनोज भने नरम देखिन्थे । ‘म जिन्दगीको यस क्षणमा मीनाजीका राम्रा–राम्रा कुरा मात्र सम्झन चाहन्छु, नराम्रा बिर्सन चाहन्छु,’ उनले भने ।
शारीरिकसँगै कानुनी रुपमा समेत यी दुवै अलग भइसके तर दुवैलाई जोड्ने दुई ज्यान अझै छन्, छोरा र छोरी । डिभोर्सपछि पुनः यात्रा जोडिने गरेका पनि छन् । मनोज–मीनाको हकमा के होला ? मनोजले सम्भावना देखाए तर मीनाले असम्भव । ‘२२ वर्ष उहाँलाई सपोर्ट गरेर बस्दा पनि मलाई असहयोग गर्नुभयो,’ उनले भनिन्, ‘अब पनि उहाँको घरमा बसेँ भने बाँचुञ्जेल मलाई आत्माले धिक्कारिरहन्छ ।’ ‘हामी २२ वर्षदेखिसँगै बसेका छौँ,’ मनोज आशावादी हुँदै भन्छन्, ‘स्वभावतः क्षणिक आवेशमा आए पनि माया त मनमा गढेर बसेको हुन्छ । अहिले आ–आफ्नो इगोका कुरा होलान्, इच्छाका कुरा होलान् तर भोलि मिलन हुन पनि सक्छ।’
निद्रा नलाग्ने, जिउ दुख्ने भएपछि चिनेजानेका साथीसँग सल्लाह गरेर नसाको भिटामिन प्रयोग ग¥यो भने निको हुन्छ भन्ने सल्लाहअनुसार केही औषधि प्रयोग गरेको हो।यसलाई डिभोर्सभन्दा पनि म ह्याप्पी इन्डिङ भन्न रुचाउँछु । डिभोर्सको निर्णय गर्नुभन्दा पहिला दुवै परिवारसँग सल्लाह गरेर सहमतिमै डिभोर्स भएको हो।
हरेक चिजमा झडङ्ग रिसाइहाल्ने, तोडफोडमा उत्रिहाल्ने मिनाको स्वभाव भएपछि हामी ग्रान्डी हस्पिटलमा काउन्सिलिङमा पनि गएका थियौँ । यो एडजस्मेन्ट डिसअर्डर हो । दोस्रो सामान्य औषधि प्रयोग गर्न सकिन्छ । तेस्रो अरू थेरापी पनि छन् भनेर डाक्टरले भनेका थिए । अलिअलि निद्रा नपरेपछि औषधि खुवाएको हो । अन्य आरोप निराधार हो । महिलाका आ–आफ्ना इच्छा÷आकांक्षा हुन्छन् । बिहे गरेपछि जसले पनि भोग्नैपर्छ । घरमा पत्नीका अपेक्षा के–के हुन्छन्, हामी कति पूरा गर्न सक्छौं त्यो बिहे गर्नेहरुलाई थाहा भएकै कुरा हो ।
हामी दुवैले सहयात्राका क्रममा एकअर्कालाई सहयोग ग¥यांै भन्ने लाग्छ । मलेसिया, युके, हङकङलगायत देशविदेश हामी सँगै गएका छौं । लाउनेखाने कुरामा सबै पुराएकै जस्तो लाग्छ । जे होस्, एउटा आधारभूत आवश्यकता हामीले पूरा गर्यौ भन्ने लाग्छ । एउटा मध्यमस्तरको आम्दानी भएको कलाकारले गर्न सक्ने हैसियत यही त हो नि।
अबको सामाजिक सञ्जालको आगमनपछिको वैवाहिक सम्बन्धलाई पहिलाको जसरी र जस्तै होस् भनेर सोच्न थालियो भने, अलि ठूलो छाती बनाइएन भने त्यसले सम्बन्ध बिग्रिन सक्छ । म पैसा, यौन र रक्सी यी तीनवटा कुरामा क्लियर छु । यी तीनवटा कुराले घर परिवार बिगार्छ भन्ने थाहा छ । पहिला ड्रिक गर्ने गर्थेँ । त्यसपछि घरझगडा भएको हो कि भनेर दुई वर्ष भयो रक्सीचुरोट छोडियो ।
विवाह पूर्वको प्रेम, वैवाहिक जीवनको अनुभूति र सन्तान सुःखको अनुभव तीनवटै चिज मलाई उनले दिएको हो । भलै हाम्रो विचार मिल्न सकेन तर त्यसका लागि म उनलाई सधैँ सम्झिरहनेछु । मिनाले नयाँ उर्जाका साथ बुटिक खोलेकी छिन् । त्यसका लागि म शुभकामना दिन्छु ।
– मिना ढकाल
त्यतिबेला बागबजारमा मेरो बुटिक थियो । एकजना बहिनी (स्टाफ) पसलमा बस्थिन् । भोलिपल्ट गएँ । ‘दिदी तपाईंको अनुहार एकदमै बिरामी, थकित जस्तो देखिएको छ’ भनिन् । त्यसको एक दुईदिनमै म बुटिक जान सकिनँ । औषधि खाएपछि ममा पसल कसरी चलाउने, कसरी भाडा तिर्ने भन्ने डर भयो । आँट नै आएन । उत्तिबेलै फोन गरेर मनोजलाई भने, ‘बाबा मैले सकिनँ । अब पसल बेच्नुप¥यो ।’ उहाँ त खुसी हुनुभयो । म एक्टिभ भएको देख्नै नसक्ने ! घरमै मात्र राख्न खोज्ने । घरमा बस्दा ‘फेसबुक चलाइस्, फोन चलाइस्’ भन्ने । जो मान्छेसँग बोल्यो त्यँहीसँग आरोप लगाउने । पसल बिक्री भएन । सामान घरमा ल्याएर थन्काइयो ।
त्यो औषधि खान थालेको दुई वर्षसम्म म रेगुलर २४ सै घण्टै बेडको बेडमै भएँ । रेगुलर खाएँ । खाँदै छोड्दै ग¥यो भने झन् असर गर्ला भन्ने डर भयो । औषधि घटाउने भन्दा पनि बढाउने काम मात्रै भयो । ओछ्यानमा पल्टिने तर निद्रा नलाग्ने । राति १ घण्टा पनि सुत्दिन थिएँ होला म । दिदीले फोन गरेर ‘नानी त्यो औषधि नखा, तलाई स्लो बनाउन खोजेको, मार्न आँटेको’ भन्थिन् । उनीहरुले बुझिसकेछन् तर मलाई थाहा भएन । औषधि नखाँदा पनि अपाङ्ग भएर बसुँला भन्ने पिरले डाक्टरले दिएअनुसार मैले औषधि खाइरहेँ ।
नुहाउन पनि नसक्ने । हिँड्न पनि नसक्ने । शरीर नै नउठ्ने । त्यति हुँदा पनि मेरो त कुरै छोडौं छोराछोरीलाई पनि एक छाक पकाएर खुवाउनु भएन । सधैँ बाहिरै व्यस्त । पछि उहाँले नै डाक्टरलाई एक्टिभ भएन, एक्टिभ बनाउन केही गर्नुप¥यो भन्नुभयो । थेरोपेटिक योगामा पठाउ न त भन्ने कुरा भयो । एक महिनादेखि तीन महिनाभित्रमा म एक्टिभ भएँ । नत्र त म बोल्दै नबोल्ने, हाँस्न पनि नजान्ने, रुन पनि नआउने भएकी थिएँ । त्यसपछि ‘त्यो डाक्टरकोमा जान्न । सक्छौ विदेश लग तर यता जान्न । लान्छौ नै भने ग्राण्डी जान्छु’ भने ।
म रिसाएरै गएको थिएँ । साइकेट्रिकले सोधे ‘के भयो ? भने ‘थाहा छैन’ । उनले ‘प्यासेन्ट तपार्इं होइन, नाम त लेडिजको लेखेको छ’ भने । मैले ‘नाम त मेरो छ तर समस्या उहाँको हो’ भनेर मनोजलाई देखाएँ । ‘उसलाई डिप्रेसन छ डाक्टर’ मनोजले मतिर देखाएर भन्नुभयो। डाक्टरले मलाई डिप्रेसनको सिम्टम्स सबै सोधे । डाक्टरले सोधेजस्तो मलाई न नैराश्य हुन्थ्यो, न जिन्दगीदेखि वाक्क लाग्थ्यो, न मर्न मन लाग्थ्यो, न डर लाग्थ्यो । मैले केही पनि हुँदैन भनेँ । डाक्टरले ‘उनलाई डिप्रेसनको सिम्टम्स छैन’ भने । त्यसपछि मनोजले २२ वर्षदेखि झगडा हुँदाका कुरा, रिस उठेका बेला भाँडा फ्याँक्नेदेखिका कुरा, यस्तो गर्छे, रुन्छे, झगडा गर्छे भन्नुभयो डाक्टरलाई ।
मलाई रुन मन लाग्यो । त्यत्रो समय उहाँसँग जिन्दगी बिताएर छोरा २० वर्ष र छोरी १३ वर्ष भइसके । अहिले आएर डाक्टरको अगाडि मेरो बेइज्जत गरे । चित्त दुख्यो । अनि मैले रुँदै डाक्टरलाई मनोजको पनि बानी भनिदिएँ । म रिसाहा टाइपको छु । झनक्क रिस उठ्छ । डाक्टरले मेरो रिस देखेपछि मनोजसँग ‘उहाँलाई मुड कुल बनाउने एउटा सिम्पल औषधि दिन्छु’ भन्नुभयो । ‘यो खानु ५–६ महिनासम्म भनेर दिए ।
उहाँले ‘काउन्सिलिङमा जाँदा पनि तिमी मिलेनाै भने कि म अमेरिका जान्छु कि तिमीलाई पठाइदिन्छु’ भन्नुभयो । त्यो बेला म खुसी भएँ । किनकि म उहाँबाट अलग हुन चाहेकै हो । अलग हुन खोज्नुको कारण धेरै थिए । कलाकार भएकाले मैले उसलाई पूरै स्वतन्त्र छोड्देको थिएँ । तर मलाई सधैं इन्टरफेयर गर्ने । कसैसँग बोल्न नदिने, काम गरेको देख्न नसक्ने । पसल खोले, बन्द गर्नुपर्ने । ब्यूटीपार्लर गर्यो बन्द गर्नुपर्ने । सहयोग केही छैन । सधैँ हतोत्साहित मात्र गर्ने । गर्न सक्दैनौ मात्र भन्ने ।
१० पटकसम्म जाँदा पनि डाक्टरको काउन्सिलिङले मलाई केही असर गरेन । उहाँको बोली केही कामै लागेन । डेढ घण्टा खेर मात्र जान्थ्यो । एकपटक मैले दिदी लिएर गएँ । दिदीले भनिन्, ‘डाक्टर सा’ब ऊ बिरामी छैन, मेन्टल प्यासेन्ट होइन यदि हो भने मलाई पनि छ किनभने मेरो घरमा पनि श्रीमान्÷श्रीमतीको झगडा भइरहन्छ । यदि तपार्इंलाई ट्रिटमेन्ट गराउनु नै छ भने दुईजनासँगै राखेर गराउनु न । उसलाई मात्र किन टर्चर दिनुहुन्छ ।’
उहाँले बुबालाई फोन गरेर ‘तपाईंकी छोरीले काट्छु, मार्छु भनी मेरो जीवनको सुरक्षा भएन, सम्झाइदिनु’ भन्नुभएछ । मैले त्यही दिन फोन गरे‌ं । झगडा प¥यो । ‘तैंले के खोजेको, म डिभोर्स दिन्छु’ भनेँ । फेरि मन पग्लिएला भनेर फोन, फेसबुक सबैतिर ब्लक गरेँ ।
पछि उहाँले ‘मिनाले अर्को डाक्टरलाई नाम लेखाएर चेकअप भइसक्यो’ भनेपछि आधा घण्टासम्म फोनमा झगडा प¥यो । त्यसको एकमहिनापछि डिभोर्स भयो । कुनै समस्या नभए पनि मलाई मानसिक रोगी बनाउने षड्यन्त्र गर्नुभयो । विश्वास गर्नसक्ने अवस्था रहेन । मैले आफ्नो जीवनको रक्षा चाहेँ, बाँच्न चाहँे, सेल्फ डिपेन्ड हुन चाहेँ अनि छुट्टै बस्ने निर्णय गरेँ ।